Ambassador Ray Vanoonekana neVatori veNhau muZimbabwe
Vari kusiya basa semumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Charles Ray, vanoti hurumende yenyika yavo ichawedzera mari yekubatsira vanorarama nehutachiwana hweHIV, pasi pechirongwa chemutungamiriri wenyika iyi, chePresident’s Emergency Fund for AIDS Relief, kana kuti PEPFAR.
VaRay, avo vari kusiya basa mwedzi uno, vataura mashoko aya pamusangano wekuonekana nevatori venhau wavaita muHarare neChipiri.
Vati Zimbabwe yakakomborerwa chose sezvo iri kuramba ichewedzerwa mari yekubatsira vanorarama neHIV/AIDS.
Vati hurumende ichawedzerawo mari yekubatsira pachirongwa chekuchecheudzwa kwevanhurume, senzira yekudzivirira kupararira kweHIV.
Panyaya yezvirango zvehupfumi izvo zvakatemerwa vamwe vakuru nemakambani avanodyidzana nawo muZimbabwe, VaRay vati nyika yavo ichashandura mutemo wayo wezvirango kana zvakaita kuti nyika yavo idzike zvirango izvi zvagadziriswa.
Zimbabwe yakatemerwa zvirango zvehupfumi neAmerica nenyika dzekuEurope nekuda kwekutyora kodzera dzevanhu. Asi zvirango izvi zvinonanga chete vamwe vakuru muhurumende nemuZanu PF pamwe nemamwe makambani anodyidzana nevanhu ava.
Ambassador Ray varatidzawo kushukikana zvikuru nenyaya dzemhirizhonga munyika vakati iyi ndiyo nyaya iri kuvadya moyo apo vari kusiya basa.
Vati chishuwo chavo kuti Zimbabwe iite sarudzo dzakachena. Vati America yakazvipira kushanda naani zvake anenge akunda musarudzo dzinotwa pasina mhirizhonga.
Vatiwo nyika yavo iri kubatsira Zimbabwe munyaya dzekupa vanhu chikafu, kunyorwa kwebundiro idzva remitemo yenyika, pamwe nekusimudzira magariro evanhu mumaruwa.
VaRay, avo vanga vari mumiriri we America muZimbabwe kubva muna 2009, vanotarisirwa kutsiwa naVaBruce Wharton, avo vakamboshanda pamuzinda weAmerica muZimbabwe kubva muna 1999 kusvika muna 2003.